Ubuntu အမေးအဖြေများ- စာမျက်နှာ2- MYSTERY ZILLION
sitthan wrote: »
ဟုတ်ပါတယ် Lucid ရော karmic ပါ GRUB 2,0 ဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်တုံးကပြောင်းတာနဲ ့မတူတော့ဘူးဗျ အောက်ကလင့်မှာ အသေးစိတ်ဖတ်နိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော် ကွန်ပျုတာကို Lucid သွင်းချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် drive ကတစ်ခုထဲရှိနေပါတယ် တခြား drive တွေကိုမပါပါဘူး ဥပမာ C: တစ်ခုတည်းရှိတာကိုဆိုလိုတာပါ ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ wubi နဲ ့သွင်းတဲ့ ubuntu က သူသွင်းထားတဲ့ Mother drive ကိုလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို ့မရပါဘူး ဥပမာ C: , , E: ရှိတယ် ဆိုပါစို ့ဗျာ C: မှာတင်တယ်ဆိုပါ်စို့ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ ့ကတော့ နဲ့E; ကိုပဲ harddisk တစ်ခုအနေနဲ ့သတ်မှတ်ပြီး C: ကို access လုပ်လို ့မရပါဘူး အဲဒါ လုပ်လို ့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေးများရှိမလားမသိဘူးခင်ဗျ manually မသွင်းချင်လို ့ပါ
နောက်ပြီး wubi ကို CD တစ်ချပ်မခုတ်ပဲနဲ့virtual drive ကနေ iso ရိုက်ပြီးတော့ Install လုပ်လို ့ရပါသလားခင်ဗျာ ( CD ဖိုးနှမြောတယ်ပြောလည်းခံရမှာပဲ :P)
ရပါတယ်။ wubi ကို virtual drive နဲ့တင်လို့ရပါတယ်။ C: ကို access ရဖို့ windows မှာ partition ခွဲပြီး တင် အဲဒီ partition မှာ တင်လိုက်ရင် မဖြစ်ဘူးလား။:rolleyes:
ဒီတခါသိချင်တာကတော့ ... သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေပါပဲ ...
၁. Internet Download Manager လိုမျိုး Download အတွက်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ Software , Ubuntu မှာ ဘာတွေရှိမလဲမသိဘူး.... ပြီးတော့ Install လုပ်ပုံလုပ်နည်း။
၂. စက်စတက်ရင် Ubuntu နဲ့ Windows နဲ့ရွေးတဲ့နေရာမှာ Ubuntu ကထိပ်ဆုံးကနေ Default ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကို Windows ကို Default ထားချင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။
၃. System Information ( My Computer - R Click - Properties ထဲမှာတွေ့ရသလိုမျိုး ) ဘယ်မှာ ကြည့်လို့ရလဲမသိဘူး။
၄. ကိုယ်တင်ထားတဲ့ Ubuntu က အထီးလား အမလား မသိဘူးဖြစ်နေတယ် ... ... Server Version လား Client Version လား မသိလို့ ဘယ်လိုသိရမလဲမသိဘူး။
၅. Ubuntu မှာ Folder တစ်ခုကို ဘယ်လို Share ပေးပြီးသုံးရမလဲ? ( တခြားစက်တွေက Windows XP တွေပါ။ )
၆. Linux က ဗိုင်းရပ်တက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လိုရမယ်ရ Anti-virus သုံးချင်တယ်ဆိုရင် ..... ဘာကို ဘယ်လို သုံးရင် ကောင်းမလဲမသိဘူး။
အဲဒါလေးတွေသိချင်တာပါခင်ဗျာ ....... :cool:
Firefox Plugin တစ်ခုခုကိုသုံးလို့ရပါတယ် ဥပမာဆိုရင် Downthemall လိုဟာမျိုးလေးတွေပါ။ IDM လောက်ကောင်းတာတော့ Linux မှာကျွန်တော်လည်း မမြင်မိသေးဘူးဗျ။
အဲဒါက Boot loader အပေါ်မူတည်မယ်ဗျ ဘယ် Boot loader ကိုသုံးပါသလဲ Wubi နဲ့ Install လုပ်ထားရင်တော့ Window boot loader ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ် အဲဒါဆိုရင်လွယ်ပါတယ် Window ထဲကပဲပြင်လို့ရပါတယ် System Properties ထဲကိုသွားပါ အဲဒီ့အထဲက Advanced > Startup and Recovery > Settings အဲဒီ့အောက်မှာ Default ကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ Grub ဖြစ်နေရင်တော့ ပြန်ပြောထားပေးပါ ဘယ်လိုအလွယ်တကူ ပြင်တယ်ကြည့်ပေးပါ့မယ်။
၄. ကိုယ်တင်ထားတဲ့ Ubuntu က အထီးလား အမလား မသိဘူးဖြစ်နေတယ် ...  ... Server Version လား Client Version လား မသိလို့ ဘယ်လိုသိရမလဲမသိဘူး။
သေချာတာကတော့ Desktop Version ဖြစ်ပါတယ် အရင်မေးနေတဲ့ မေးခွန်းတွေအရဆိုရင် ကိုအလက်ဇန်းဒါးရဲ့ လင်းနစ်မှာ GUI ပါနေပါတယ်။ Ubuntu Server က Default အားဖြင့် GUI မပါဘူးဗျ ထည့်ချင်ရင်သတ်သတ်ထည့်ပေးရပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် မလိုအပ်လှပါဘူးဗျာ ထည့်ချင်ရင်တော့ အလကားရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ် AVG, Avest တို့မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကျန်တဲ့မေးခွန်းတွေက ကျွန်တော်လည်း ပြန်ကြည့်မှသိမှာမို့ နောက်မှဖြေပေးပါ့မယ် အခုတော့ ဝင်းဒိုးပေါ်မှာနပန်းလုံးနေလို့ စမ်းကြည့်လို့မရဖြစ်နေပါတယ်။ ကြားထဲလည်း တစ်ယောက်ယောက် ဖြေပေးပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဒါက ubuntu version ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် 9.04 နဲ ့အထက်ဆိုရင် တစ်မျိုး ကျန်တာကတစ်မျိုးပါ
အများကြီးရှိပါတယ် ကြိုက်တာသုံးလို ့ရပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ clamav ကိုသဘောကျပါတယ် ဒါပေမယ့် သူကတော့ CLI နဲ ့အသုံးပြုရပါတယ်
IPV6 ကို ဘယ်နားသွားပြီး disable လုပ်ရမှာလဲ။ မသိလို့ပြောပါဦး။
ကျွန်တော် Ubuntu ကို Install လုပ်တာ ဒီ error တက်လာပြီး ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရလို့ အကြံဉာဏ်လေးပေးကြပါအုံးဗျာ။ဘာလိုအပ်နေတာလဲ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
Linux အခြေခံမို့ လေ့လာမို့ပါဆို အစနဲ့တစ်နေလို့။
သူပြောတဲ့အတိုင်းဆို Permission မရှိလို့ဆိုတော့ Install လုပ်နေတဲ့ User account ဟာ Limited များဖြစ်နေသလား။ Bootloader တွေပါ ပြင်ရမှာဆိုတော့ Administrator Role ပဲ Install လုပ်လို့ရမယ်ဗျ။ Administrator account တစ်ခုနဲ့ဝင်ပြီးမှ Install လုပ်ကြည့်ပါဦး။
သီချင်ခွေဆိုရင်တော့ media player တစ်ခုခုရဲ. open disc ရွေးရင်ဖွင့်လို.ရပါတယ်
software ခွေတွေ dataခွေတွေသာ မရတာပါ
ဘယ်လို မရတာလဲ။ device က mount မလုပ်တာလား။ မပေါ်လာတာလား။ ပုံမှန်အားဖြင့် desktop မှာ cd/dvd drive လေးတက်လာပါတယ်။
desktop မှာcd drive မပေါ်ပါဘူး
UBUNTU မှာ Folder Sharing ကို ဘယ်လိုပေးရလဲ
အဲဒီ Folder ကို Windows XP စက်တွေကနေလဲ အသုံးပြုချင်လို့ပါ။
ဘယ်လို Setting တွေ လုပ်ရလဲ ။ တစ်ဆက်ခြင်းစီ ရှင်းပြပေးပါလား ခင်ဗျား။
ကိုယ် Share လုပ်ချင်တဲ့ folder ကို right click --> sharing options ---> Share this folder ---> Install Services
သူက Samba Package သွင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်သိချင်တာက..Ubuntu မှာ Compiz Fusion effect တွေသုံးရင် စက်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပါ..။ အခုလက်ရှိ သုံး ကြည့်နေတာတော့ တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်..။ ဒါပေမယ့် Memory usage ဘယ်လောက်သုံးလဲ..။ ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေ ရှိမလဲ ဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်..။ သိနားလည်သူများဖြေပေးကြပါဗျာ..။
စက်ကတော့ graphic card နဲ့ပဲ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်။ လေးသွားတာတွေ နှေးသွားတာတွေတော့ ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူး။ CPU နဲ့ Memory ကတော့ Effect သုံးတဲ့အခါမှာ နည်းနည်းစားတယ်။ အဓိက Graphic Card Memory နဲ့ GPU ကောင်းရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။
Ubuntu မှာ ရှိတဲ့ Mozilla Firefox Browser မှာတော့ တခြား Windows ထဲက Browser တွေလို "Tools" menu မှာ "Options" ဆိုတာ မရှိပါဘူး.. "Edit" menu အောက်မှာ "Preferences" အနေနဲ့ပဲ ရှိပါတယ်..
ကျွန်တော့ကို ကူညီပါအုံးဗျ .. ဟီးးး
Ubuntu ကို Update လုပ်တာ အောက်က စာကြီးပေါ်နေတယ်... နောက်ပြီးတော့ ကဿျွန်တော့်ရဲ့ Compizconfig-setting-manager က ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး ... အရင်တုန်းကရတယ်.. Preferences >> Compiz Config Setting Manager ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဘာမှ တတ်မလာဘူး ... ကူညီပါအုံး... အဟတ်
[email protected]:~# sudo apt-get install Ubuntu-tweak
Ubuntu 10.04 LTS ကို တင်ထားတယ် ..... အဲဒီမှာ Folder Sharing လုပ်ချင်လိုဿဿဿဿ.....
HDD ကို နှစ်ပိုင်း လုပ်ထားတယ် ။ တစ်ပိုင်ကို linux Ext4 နဲ ပိုင်းထားတယ် . ... နောက် အပိုင်းကို FAT နဲ ပိုင်းထားတယ်....
အဲဒီမှာ FAT ပိုင်းထားတဲ့ အပိုင်းက Share လုပ်ထားတဲ့ Folder ကို Windows XP စက်က သုံးလို့ရတယ်။ File တွေ ထည့်လို့ရတယ်။ Full Permision ပေ့ါ။ Ext4 ပိုင်းထားတဲ့ အပိုင်းကျတော့ Folder ကို ၀င်လို့တောင်မရဘူး။။။။ ကျတော်က Partation အားလုံးကနေ Folder တွေကို share လုပ်ချင်လို့ပါ.။ Ext4 က Folder တွေကို Windows က နေ လှမ်းသုံးလို့ရအောင် နည်းလမ်းလေးပေးပါဗျ။......
Nano wrote: »
Ubuntu မှာ Drive တွေကို ဖွင့်လိုက်တိုငး် Desktop ပေါ်မှာ လာလာပေါ်နေပါတယ်။ အဲဒါတွေကို မပေါ်ချင်ပါဘူး။ အဲဒါဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲ ပြောပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ubuntu မှာ Fire Effect ရအောင် ဘယ် လို လုပ် ရ ပါ သ လဲ ။ ဆို လို သည် မှာ Folder ကို ဖွင့် လိုက် တိုင်း မီး ထောက် ပုံ စံ နဲ့ တက် လာ တာ မျိုး ပေါ့ ။ compiz_config_settings_manager တော့ ရှိ ပါတယ် ။ ဘယ်လို လုပ် ရ ပါ
မ လဲ ။ နောက် တစ် ခု က ubuntu အတွက် အသုံး ၀င် မဲ့ software လေး တွေ သိ ချင် ပါ တယ်။
နောက် တစ် ခု က ubuntu အတွက် အသုံး ၀င် မဲ့ software လေး တွေ သိ ချင် ပါ တယ်။
မီးတောက်တာတော့ မပြောတတ်ဘူး Effect တစ်ခုခုရှိမယ်ထင်ပါတယ် Ubuntu အတွက် အသုံးဝင်မယ်ဆော့ဝဲဆိုတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် သူအသုံးဝင်လို့မဖြစ်ဘူးလေ ကိုယ်အသုံးဝင်ရမှာမဟုတ်လား ဘာအတွက် သုံးတာလဲပြောဦးဗျ အဲဒါမှ ဘယ်ဟာအသုံးဝင်မယ် ပြောလို့ရမှာပေါ့
Ubuntu မှာ apple ရဲ့itune ကိုသုံးချင်ပါတယ်..
64 bit မှာပါ။အားလုံးကို သိုင်းကျူးုပါ။
ubuntu ကိုစမ်းသုံးနေတာပါ။ဘာအတွက်သုံးတာလည်းဆိုတော့ Linux အကြောင်းကိုအခြေခံကစပြီးသိချင်လို့ပါ။:D နောက်တစ်ခုက windows သုံးရတာ ပျင်းလာ လို့ပါ။ ။အဲကို လူပျို ပြောသလို ကိုယ်အသုံး၀င် တဲ့ software လေးတွေ ပြောပြပါလား။:D
ဒုက္ခပဲ ဂျာအေး သူ့အမေ ရိုက်နေပြီ ကျွန်တော့် အသုံးတည့်တာ ခင်ဗျားမတည့်ဘူးလေ။ :cool: အဲဒါကြောင့် ခင်ဗျားဘာအတွက် သုံးသလဲလို့မေးတာပါ ပရိုဂရမ်ရေးချင်တာလား ဒါမှမဟုတ် အိမ်မှာအပျင်းပြေသုံးမှာလား စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ ဘာအတွက် သုံးမှာလည်းမေးတာပါ။ အဲဒါမှ ခင်ဗျားသုံးချင်တဲ့ အပိုင်းမှာ ဘယ်ဟာတွေ အသုံးတည့်သလဲ ကြည့်ပေးလို့ရမှာပေါ့ဗျာ။
သူ့အစား ကျနော်ပဲမေးပေးတော့မယ် ...
1. CD/DVD Burning အတွက် Nero လိုမျိုးပေါ့ဗျာ ... ဘာ Software ကောင်းလဲ?
2. Video . DVD တွေကြည့်ဖို့ (or) MP3 နားထောင်ဖို့ ... ဘာ Software ကောင်းလဲ?
3. Zip ချုံ့ဖို့ကော ဘာကောင်းလဲမသိ ( 7Zip ပဲကောင်းမယ်ထင်တယ် )
4. Photo Editing ကော ( ACD See, Microsoft Picture Manager လိုမျိုး ) ... ဘာ Software ကောင်းလဲ?
လောလောဆယ်တော့ ဒါပဲစဉ်းစားလို့ရတယ် ... :P
လူပျိုကြီးသုံးတဲ့ အထဲက သာမန် user အတွက်ကောင်းမယ်ထင်တာလေးတွေရှိရင်လဲပြောပြသွားလေ။
ဥပမာ - Microsoft Office လိုမျိုးအတွက် OpenOffice.org သုံးမယ်။ Internet ကြည့်ဖို့ Mozilla & Chrome သုံးမယ်။ pdf ကြည့်ဖို့ Adobe Reader သုံးမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
5. pdf convertor ဘာကောင်းလဲ ကိုလူပျို .. ပြီးတော့ ......
6. mp3,mp4 convertor လေးတွေ။
နောက်မှ သိချင်တာလေးတွေထပ်မေးတော့မယ်နော် ...
အရင်တုန်းက မေးဖူးတာလေးတွေပါဗျာ ... မပြီးပြတ်သေးလို့ ထပ်တင်လိုက်တာ ...
Firefox Plugin တစ်ခုခုကိုသုံးလို့ရပါတယ် ဥပမာဆိုရင် Downthemall လိုဟာမျိုးလေးတွေပါ။ (လူပျိုကြီး)
Wubi တို့ Grub တို့ကျနော်မသိဘူး ကိုလူပျိုရယ် .. Windows တင်သလိုပဲ CD/DVD ကို First Boot ပေးပြီးတင်ခဲ့တာပဲ စတင်တုန်းကလဲ ဘာမှမသိသေးတော့ ဘာကဘာလဲကျနော်လဲမသိဘူး ... ... အဲဒါ ကိုလူပျိုပဲ ဖြစ်နိုင်တာကို ပြောပြပေးတော့ ...
ဒါတော့ ရပြီ ...
( သေချာတာကတော့ Desktop Version ဖြစ်ပါတယ် အရင်မေးနေတဲ့ မေးခွန်းတွေအရဆိုရင် ကိုအလက်ဇန်းဒါးရဲ့ လင်းနစ်မှာ GUI ပါနေပါတယ်။ Ubuntu Server က Default အားဖြင့် GUI မပါဘူးဗျ ထည့်ချင်ရင်သတ်သတ်ထည့်ပေးရပါတယ်။ )
Server တင်မယ်ဆိုရင်တော့ ... ကျနော် Red Hat ကိုပဲရွေးမိမယ်ထင်ပါတယ်။
သူက Samba Package သွင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ (Opengun)
( ပုံမှန်အားဖြင့် မလိုအပ်လှပါဘူးဗျာ ထည့်ချင်ရင်တော့ အလကားရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ် AVG, Avest တို့မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ) (လူပျိုကြီး)
ကျနော်မသိသေးတဲ့ နံပတ် ... ၂ . ၃ တွေကိုပြောပြပေးပါဦး ...
GIMP , Pisaca
ကိုT.L ခင်ဗျား...ubuntu 10.4 မှာ မရကြောင်းပါ။thx for ur time...Linux သမားများ သိရင်ကူညီကြပါအုံး..ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်...
Software တွေ ဘယ်လို Install လုပ်ရမယ်ကတော့ ပြောပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Synaptic Package Manager ကိုသုံးရင်လည်းရပါတယ်။ အောက်မှာတော့ command line ပဲထည့်ထားပါတယ်။ Synaptic Package Manager သုံးရင်တော့ အောက်မှာပြောထားတဲ့ နာမည်ကိုသာ Search နဲ့လိုက်ရှာကြည့်ပါ။
System Properties အတွက်က gnome-device-manager ကိုသုံးကြည့်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Applications >> System Tools >> Device Manager ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။
Grub အတွက်ကတော့ တကယ်ကတော့ သူ့ configuration file ကိုဝင်ပြင်ရင်ရပါတယ် GUI နဲ့လွယ်လွယ်ပြင်လို့ရအောင်ဆိုရင် startupmanager ကိုသုံးရင်ရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ System >> Administration >> Startup Manager ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်သုံးတာ သူများသိပ်မသုံးဘူးဗျ Office မသုံးဘူးလေ LaTeX ကို TexMaker နဲ့သုံးတယ် အဲဒါက End User အတွက်အဆင်မပြေဘူးလေ။
GTalk, MSN, Yahoo အတွက်ဆို Pidgin သုံးတယ်လေ Empathy သုံးလည်းရပါတယ် ဒါပေမယ့် Pidgin သုံးနေကျဖြစ်တာရယ် သူ့ကိုပိုသဘောကျလို့သုံးတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ IRC သုံးဖို့လိုရင်တော့ XChat သုံးတတ်တယ်။
5. PDF က ပြောင်းဖို့လိုလို့လားဟင် Application အားလုံးနီးနီးမှာ PDF ကို Export လုပ်ဖို့ ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ Export လုပ်ဖို့မပါရင်တောင် Print လုပ်လိုက်ပါ အဲဒီ့မှာ Print to File နဲ့ Print ထုတ်လိုက်ရင် PS and PDF ကတော့ သေချာပေါက်ရပါတယ်
6. Converter ကတော့ ကျွန်တော်က ffmpeg သုံးတယ် အဲဒါက command line ပါ အဲဒါကို GUI ပါတာ လိုချင်ရင်တော့ winff ကိုသုံးကြည့်ပါ။ Install လုပ်တာကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ apt နဲ့ဆိုလည်း ffmpeg or winff ပဲရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော့် NVIDIA graphic drive ကို active လုပ်ပြီးလို့ကွန်ပျူတာကိုrestart ချပြီးတိုင်း ဟို desktop display ထိတက်မလာတော့ဘဲနဲ့ command ဘဲရိုက်လို့ရတော့တယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာ။
Ubuntu ကို entertainment ပိုင်းနဲ့ programming ပိုင်း မှာ သုံးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကြောင့် entertainment အတွက်ဘာ software တွေ အသုံး၀င်မလဲ။ နောက်ပြီး net bean လို software ကို offline အနေနဲ့ ဘယ်လို install လုပ်ရသလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ဗျာ။vb.net 2005 ကို ubuntu မှာ install လုပ်လို့ရပါသလား။မရရင်လည်း အလားတူ software မျိုးရှိပါသလား။သိချင်ပါတယ်ဗျ။ဖြေပေးပါဦးခင်ဗျ:cool:
Programming ပိုင်းအတွက်က Python ဆိုတာရှိပါတယ်
Entertainment ကတော့ VLC, RhymeBox ... များပါတယ်.. Open Source Software တွေအများကြီးပါ။
Ubuntu အကြောင်းသေချာသိချင်ရင် www.ubuntu4mm.org မှာသွားဖတ်လို့ရပါတယ်။
programming အပိုင်းမှာဆိုရင် K ပြောသလို python ရှိမယ်ဗျာ
အမှန်က ကျွန်တော်တို ့မေးမယ့််သာမေးတာ ကိုစေတန်က essential for ubuntu ဆိုပြီး post ရေးထားတယ်
Linux မှာလည်း ရေးလို့ရတဲ့ Language တွေများပါတယ် Unix Environment ရဲ့ အရင်ကတည်းက အသုံးအများဆုံးကတော့ C & C++ ပါ GCC Compiler မှာ အတော်များများပါပါတယ်။ မှတ်မိသလောက်ဆို C & C++, Fortran, Pascal, Parl, Pascal, Java, PHP, Ruby, Python စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါက Language တွေကိုပြောတာပါ။ IDE ဆိုရင်အသုံးများတာက Eclipse, Netbeans, KDevelop, Ajunta ဒါတွေကိုအသုံးများပါတယ် အဲဒီ့ IDE တွေမှာ စောစောကပြောခဲ့တဲ့ Language အားလုံးနီးနီးကို Support လုပ်ပါတယ် သက်ဆိုင်ရာ Plugin တော့ ထည့်ဖို့လိုတာပေ့ါလေ။ အဲဒါတွေ Install လုပ်မယ်ဆိုရင် စသုံးကာစလူကတော့ On-Line ပဲသွင်းဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် အများအားဖြင့် Dependency တွေရှိပါတယ် အဲဒီတော့ မသုံးတတ်ခင်မှာ သိပ်စိတ်ညစ်မှာစိုးရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် apt or synaptic ကိုပဲသုံးဖို့ အားပေးပါတယ်။
Visual Studio ဆိုတာ Microsoft Product အကြီးကြီးပါ ဘယ်လိုမှ Linux မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကလည်း Microsoft က Language တွေဖြစ်တဲ့ VB, C# ဒါပဲတတ်တယ် Linux မှာလည်း ဒါနဲ့ပဲရေးချင်တယ်ဆိုလည်း သိပ်တော့ကိစ္စမရှိသေးပါဘူး .Net Framework ကို Open source implement လုပ်ထားတဲ့ Mono Framework ရှိပါတယ် Java လိုတော့ တစ်ခါရေး တစ်ခါပဲ Compile လုပ် Binary ယူသွားလို့တော့ လုပ်လို့မရပါဘူး Mono Framework မှာ Recompile တော့ပြန်လုပ်ရပါမယ် ၁၀၀% အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်ပေမယ့် ၉၀% လောက်အထိတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ mono-project.com မှာသွားကြည့်ပါ။
Netbeans က Install လုပ်ရတာ လွယ်ပါတယ် netbeans.org ကနေ Linux အတွက် Installer ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ ပြီးရင်တော့ အဲဒါကို Execute လုပ်နိုင်ဖို့ Permission ပေးပါ Permission ကို GUI နဲ့ပေးချင်ရင် Right Click >> Properties >> Permissions >> Execute ကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဝင်းဒိုးလိုပဲ Double Click လုပ်လိုက် ပြီးရင်တော့ Installer ခိုင်းတဲ့အတိုင်း Install လုပ်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ် ခက်တာမှမဟုတ်ပဲ။ Eclipse လည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။
panel မှာရှိတဲ ့....volume icon ....network icon ....bluetooth icon တို ့ကို error တက်ပြီးတော ့....delet လုပ်လိုက်တာ.....panel ထဲကအကုန်ပျောက်သွားပါရော.....အဲဒါပြန်လိုချင်လို ့....add to panel ထဲမှာလိုက်
ရှာတော ့လဲမတွေ ့ဘူး....အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီး....ပြန်ယူရမှာလဲ မရ ရင်တော ့...ဝင်းဒိုးထဲက.....ဝူဘီ နှင် ့တင်ထားတဲ ့...ubuntu ကို delet လုပ်ပြီးတော ့ပြန်တင်ရတော ့မှာပဲ:102:
ူဝူး....:cool: တော်သေးတယ်...ဘယ်သူမှမဖြေထားသေးလို ့....အဆင်ပြေသွားပါပြီ.....www.ubutuforums.org ထဲမှာလိုက်ရှာလိုက်တာ အဖြေကိုတန်းတွေ ့တော ့တာပဲ:65:
Log out of Gnome, then back in
ubuntu 9.10 မှာ squid installation and configuration လုပ်နည်းလေး သိချင်ပါတယ် squid-3.1.8.tar.gz ကို်ဘယ်လို install လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေလိုပါ။
ခင်ဗျား Download လုပ်ထားတာက Binary or Source ဘာမှန်းတော့မသိဘူး Source ကနေတော့ Compile မလုပ်ပါနဲ့ Dependency ပြသနာဖြစ်ရင် ရွာလည်နေမယ်။ အလွယ်ဆုံးက apt နဲ့ပဲ Install လုပ်ပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ Link မှာသွားကြည့်ပါ။ Configuration file တွေဘယ်နားမှာ ထားသလဲကိုလည်း သူ့အထဲမှာပြောထားပါတယ်။
Configure လုပ်တာလည်း မလုပ်တတ်ရင်တော့ GUI နဲ့ Configure လုပ်ကြည့်ပါ Webmin မှာ Squid ကို GUI နဲ့ Configure လုပ်လို့ရပါတယ်။ Webmin Install လုပ်တာကို အောက်မှာပြထားတဲ့ Link မှာကြည့်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ မပါတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေဖြစ်လို့ ဖတ်လို့ရမယ်နေရာ ရှာပေးခဲ့ပါတယ် အကြမ်းဖတ်ကြည့်သလောက်တော့ ခက်ခဲတဲ့အလုပ် မပါပါဘူး သွားသာဖတ်ကြည့်ပါတော့။
ကိုစေတန် က ဒီကိုညွှန်လို့ ဒီကိုရောက်လာတာပါ ဒီနေရာကိုသိတာတော့ ...ကြာပါပြီ..တစ်ခါတော့မေးဘူးပါတယ်...
ကျွန်တော် ကိုစေတန် နဲ့တွေ့မှ ပဲ ဝဋ်လည်တော့တယ်.... :P ...
[ google မှာ ရှာကြည့်ပြီးပါပြီ...ချာချာလည်နေလို့ ပါ ကိုစေတန်ခင်မျာ .. ]
ကျွန်တော် Ubuntu server 10.04 LTS ကိုစမ်ကြည့်ပါတယ်....
webmin ကိုသုံးထားပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ...file share အတွက်လည်း အဆင်ပြေပါပြီ...
တစ်ခု က ...webmin ကို ဘယ်လိုဆက်သွားရမလဲနားမလည်တော့ပါဘူး...ခင်မျာ..
ဆိုလိုတာ က ... ကျွန်တော် webmin ကို management ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ဘဲဖြစ်နေပါတယ်... ကျွန်တော် က လောလောဆယ် local မှာ ပဲ စမ်းကြည့်ပါတယ်...မဖြစ်မနေ လုပ်ရမဲ့ server ပေါက်စကလေး လုပ်စရာရှိနေလို့ ..သိပ်နားမလည်ဘဲ လုပ်နေရတော့ ရှေ့မရောက်သလိုဖြစ်နေပါတယ်...php5 ,apache2.2 , phpmyadmin စတာတွေလည်း အားလုံး ပြီးပါပြီ...webmin ကနေ ဘယ်လို domain name တည်ဆောက်မလဲ ...အခွဲပေါ့ ...နောက်တစ်ခု က ...publish_html ဖိုင်ကို ဘယ်လို ပေါ်အောင်လုပ်ရမလဲ ... ကျွန်တော်တို့ hosting server တစ်ခု ကနေ hosting ..domain ဝယ်ခဲ့သလို မျိုးပေါ့ ...အဲလိုတွေ အစဉ်တစ်ကျ ဖြစ်အောင် ဒီ webmin နဲ့ ဘယ်လို စခန်းသွားရမလဲ မသိတော့လို့ပါ...
အီးမေးလ် ဖြစ်ဖြစ် .... ဒီအတွက် Ebook ကောင်းကောင်းလေး ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပြီး ကူညီပေးပါအုံးခင်မျာ......
sanlinhtet wrote: »
Webmin က စာအုပ်ကရှိတော့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် ၂၀၀၄ လောက်ကစာအုပ်ဆိုတော့ အတော်ကို ဟောင်းနေပါပြီ အဆင်ပြေတာကတော့ Webmin ရဲ့ဆိုက်ကိုသွားပါ Documentation ထဲမှာ Tutorial တွေပါပါတယ် အဲဒါကိုဖတ်တာ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်က ကြည့်ပဲကြည့်ပေးလိုက်တာပါ Webmin သုံးတဲ့လူလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခု ခင်ဗျားလုပ်ချင်တဲ့ဟာက Webmin ထက် Virtualmin ကပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ Domain Management တွေကို CPanel လိုပဲ User ကိုလည်း ပေးလုပ်လို့ရပါတယ်။ Virtualmin ဆိုက်ကိုသွားပါ အဲဒီ့မှာ Demo လည်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် အဲဒါကိုလည်း တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ သူလည်း Documentation ထဲမှာ Tutorial ပါပါတယ် အဲဒါကိုပဲဖတ်ကြည့်ပေါ့။
သူက လူပျိုကြီးယောင်ဆောင်နေတာ အကိုမှမသိပဲ ... :P
လူပျိုကြီးယောင်ဆောင်ပြီး အပျိုကြီးကို ကြံစည်နေတာ .........
ဟုတ်လားဗျ ကိုလူပျိုကြီး ... ကို Alexander ကတော့ ..တည့်တည့်ကိုပစ်နေပြီ...
ငြိမ်နေရင် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလား... ဟဲ ဟဲ ...
အင်း... ငြိမ်နေရင် အဲလိုများ အထင်ခံရနည်း မှတ်လို့ဆိုပြီး တိတ်တိတ်လေးနေတာပါ :P